Agarsiisa Islaayidii Agarsiisuu
Agarsiisa islaayidii jalqabuuf karaalee adda addatu jiru. erga agarsisni islaayidii hojateen booda too'annoo dhiibuun fayyadamuu ykn qabduulee hantuutee cuqaasuu dandeessa.
Duraantoon yeroo hunda agarsiisuu islaayidii islaayidii tokkoffaarraa jalqaba . Hujee kaan hanga islaayidii maayiitti, olaansuu dandeessa. Qindaa'innoota kanneen jijjiru dandeessa.
Agarsiisa Islaayidii Adeemsiisu
Agarsisiicha adeemsiisuuf, Agarsiisa Islaayidii - Agarsiisa Islaayidii.
Gara galtee itti aanuutti ykn islaayidii itti aanuutti olaansuuf, cuqaasi.
Maayyii ga'uu duratti agarsiisiicha kutuuf ESC cuqaasi.
Agarsiisa islaayidii too'achuuf, fuurtuuleen baay'ee hedidu ta'anitu jiru. Ajajoota barbaachiisoota ta'anin bafata halaqaraa banuuf, mirga-cuqaasuu dandeessa.
Agarsiisa islaayidii ofmaa mul'isuu (kiosk halata)
Gara islaayidii itti aanuutti ofmaan jijjiiruuf, islaayidoota dirqama ramadu qabda.
Iddoo Islaayidii olaansi keessatti, Battalumatti cuqaasitii tumaata sa'aati fili.
Islaayidoota Hundaaf Fayyadami Cuqaasi.
Gara islaayidii itti aanuutti darbuuf, tokkon tokkon islaayidoota, sa'atti garagraa ramaduu fi dandeessa. amali sa'aatti shaakalakename sa'aati sirri kenname akka argatu si gargaara.
Erga isaayidoota hundi muul'atan booddatti gara islaayidii itti aanuutti olaansuuf, battaluumatti irra deebi'uu islaayidiicha diraqama qindeessu dandeessa.
Agarsiisa Isiaayidii - Agarsiisa Islaayidii Qindaa'noota fili.
Iddoo Maxxansa keessatti Ofmaa cuqaasiitii sa'aatti afuurfannoo agarsiitoota giddu filadhu.
Faayilii irraa agarsiisa islaayidii
Kakaasaa ajaja, itti aansuuniis, -agarsiisa hallawwan murteessaa fi maqaafaayilii Impress LibreOffice jalqabuu dandeessa, fakkeenyaaf maqaa faayilii, maqaafaayilii.odp jedhu kakaasaa ajajoota keessaa filachuuf, itti aanuu galchu dandeessa:
kuniis soffice xurree sagantaa sirna keetti keessatti akka jirruutti fudhata. maqaafaayilii.odp immoo galeeloo amma keessatti argama.
Title is: Agarsiisa Islaayidii Agarsiisuu